Igumbi elitofotofo labantu abayi-2 kwidolophu yaseLegnica - I-Airbnb
Igumbi elitofotofo labantu abayi-2 kwidolophu yaseLegnica
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMarzena
Igumbi elincinci kodwa elitofotofo elineebhedi ezimbini ezinokudityaniswa. Ivalelwe ngesitshixo. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elisetyenziswa nangabanye abantu ziyafumaneka ukuba zisetyenziswe ziindwendwe. Kukho umatshini wokuhlamba impahla kwigumbi lokuhlambela nekhitshi elinento yonke oyifunayo ukuze ulungiselele uze utye kamnandi. Kwindawo yempahla kukho iayini, ibhodi yokuayinela kunye nomatshini wokomisa iinwele. Kanye phakathi eLegnica, ipaki entle ekumgama omfutshane. Amaxesha okubhalisa xa ufika anokutshintshwa nokufikelela lula kwizitshixo.
Eli gumbi yinxalenye yeflethi enamagumbi okulala amathathu elungiselelwe iindwendwe ngokupheleleyo. Ikhitshi lingakwelinye icala lepaseji.
Eli gumbi yinxalenye yeflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi amathathu ekulahlwa ngokupheleleyo ziindwendwe. Ikhitshi libekwe kwelinye icala lepaseji.
Iflethi ikwindawo elula kakhulu embindini weLegnica. Ukusondela kweMarike kwenza kube lula ukufumana iivenkile, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezinkulu ngamanyathelo ambalwa. I-Biedronka ikufutshane kwaye inepaki entle yomthetho kunye nePalermo.
Iflethi ikwindawo entle kakhulu embindini weLegnica. Ukusondela kweMarike Square kuthetha ukuba zininzi iivenkile, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezinkulu onokuya kuzo ngeenyawo. Kufuphi yi-Biedronka. Kukho neLegnica Park entle kunye nePalm House.
Umbuki zindwendwe ngu- Marzena
Ndifumaneka ixesha elininzi kwiindwendwe.
Ndifumaneka kwiindwendwe ixesha elininzi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Legnica